Intengiso yosuku oluphambili lwe-ugreen: gcina i-25% kwitshaja, iintambo, izixhobo!
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Intengiso ye-Ugreen kwangoko yoSuku lwe-Nkulumbuso: gcina i-25% kwitshaja, iintambo, izixhobo!
Intengiso ye-Ugreen kwangoko yoSuku lwe-Nkulumbuso: gcina i-25% kwitshaja, iintambo, izixhobo!
Intengiso ngu-Ugreen: izimvo ezichazwe kweli bali zinokungazibonakalisi izikhundla zeFoneArena! isikhanyeli
Umenzi wesincedisi u-Ugreen wasekwa ngo-2012 ukusukela ngoko, inkampani yakhele igama layo ekunikezeleni izixhobo ze-elektroniki kunye nezixhobo ezisoloko zizama ukubamba ibhalansi phakathi kokufikeleleka, ukuvelisa izinto ezintsha, ukhuphiswano kunye namava omsebenzisi afanelekileyo. Ukuza kuthi ga ngoku, uphawu lufikelele kubasebenzisi abazizigidi ezingama-40 kumazwe angaphezu kwe-100 kwihlabathi liphela ngeemveliso ezisukela kwizixhobo zokutshaja, iifowuni kunye nezixhobo zekhompyuter, ukuya ekhaya nakwizincedisi zeemoto, kwaye bafumana ukuthembela kwabo kulwenziwo olukumgangatho ophezulu kunye nenkonzo yeprimiyamu.
Funda ngakumbi kwi-Ugreen.com
U-Ugreen ngoku ubambe eyakhe intengiso yokuthengisa ngaphambi kweNkulumbuso kwaye abasebenzisi bethu abathandekayo beFowuniArena ngoku banokusebenzisa ikhowudi ekhethekileyo ye-25%. Yisebenzise kwisitokhwe kwitshaja ezikhawulezayo, iintambo, iiadaptha, kunye nokuma kwezixhobo zakho eziphathwayo!
Nantsi into onokuyifumana:
Iiadaptha kunye neehabhu:
I-Ugreen USB Type-C ukuya kwi-3.5 mm iadaptha yeadaptha
I-UGREEN USB C ukuya kwi-3.5mm iAdapter yeNtloko
- sebenzisa ikhowudi UGREENPA001
$ 3 icinyiwe (25%) Thenga kwiAmazonSiphila kwihlabathi elingenamakhwiniba kwaye iiadaptha zeefowuni ezixokayo malunga noku ayisoze ibe ngumbono ombi. I-adaptha ye-headphone ye-Ugreen USB C kunye neeapos ze-DAC ziya kusebenza nee-iPads (Air kunye nePro), iifowuni zeSamsung, iiPixels zikaGoogle, kunye nezinye izixhobo ezithandwayo ezinezibuko lohlobo C lwe-USB.
I-Ugreen USB Type-C ukuya kwi-USB 3.0 (2-pack)
UGREEN USB C ukuya kwi-USB 3.0 Adapter 2 Pack
$ 2 icinyiwe (25%) Thenga kwiAmazonHayi, sisenazo izixhobo ezininzi eziphuma nge-USB 3.0 (USB Type-B) plug. Le pakethi incinci ayikuniki enye kodwa ezimbini zohlobo-C kwii-adapters ze-Type-B, zokukunceda uqhagamshele okudlulileyo kwikamva.
I-hub ye-USB Type-C hub enezibuko ezi-4
UGREEN USB C Hub 4 amazibuko USB Uhlobo C ukuya USB 3.0
$ 3 icinyiwe (25%) Thenga kwiAmazonNgendlela efanayo nale ingentla, le hub ye-USB Type-C ibonelela ngamazibuko ama-4 e-USB ukuze uqhagamshele ii-USB flash drive, abafundi bekhadi, okanye ezinye izixhobo. Inayo iplagi ye-Micro USB ekugqibeleni yamandla.
I-adaptha ye-ethernet ye-Ugreen USB Type-C
UGREEN USB C ukuya kwi-Ethernet Adapter RJ45
- sebenzisa ikhowudi UGREENPA002
$ 5 isaphulelo (30%) Thenga kwiAmazonI-Wi-Fi ilungile kwaye konke kodwa akukho nto ibethayo inonxibelelwano lwangempela kwi-router yakho. Esi sixhobo sinika iplagi ye-ethernet yeMacBook yakho, iChannelbook, nayiphi na ilaptop yeWindows, okanye iipilisi.
Iikhowudi kunye neeshaja
I-Ugreen USB Type-C 20 W itshaja ekhawulezayo
UGREEN USB C itshaja Mini 20W
$ 3 icinyiwe (25%) Thenga kwiAmazonIncinci, kodwa inamandla-le tshaja incinci iya kukhupha i-20 W yamandla, ukubonelela ngokutshaja ngokukhawuleza kwi-iPhone yakho ye-11 okanye isixhobo sechungechunge se-iPhone 12. Ewe kunjalo, kunye neapos; iyahambelana neefowuni ze-Android, njengeeSamsung Galaxies zakho, izixhobo ze-OnePlus, iiPixels zikaGoogle, kunye nezinye.
Intambo ye-Ugreen Lightning USB Type-C ye-angled
UGREEN Right Angle Lightning Cable MFi Iqinisekisiwe i-USB C
$ 4 isaphulelo (25%) Thenga kwiAmazonKwi-iPhone yakho ye-11 okanye i-iPhone 12-icala elikhanyayo lale ntambo likwi-90-degree angle. Oku kwenza ukuba kube lula ngakumbi xa ubiza ifowuni yakho kwiimeko ezithile-ngakumbi ukuba iyasetyenziswa kuqhelaniso lomhlaba.
Thina kwi-PhoneArena sigcina umkhondo wazo zonke iifayile ze- Intengiso yoSuku lweNkulumbuso , zombini eAmazon nakwezinye iindawo. Kuya kufuneka ujonge indawo yethu yokujongana nezona zivumelwano zibalaseleyo zokufumana into oyifunayo!
Intambo yokutshaja ye-Ugreen Type-C ye-USB
UGREEN USB C ukuya kwi-C C ye-Cable ye-Angle yasekunene
$ 2 icinyiwe (25%) Thenga kwiAmazonYenzelwe ukuphatha iitshaja ukuya kuthi ga kwi-60 W le ntambo ilungele ukuhambisa amandla kwiLaptop yakho okanye kwi-netbook.
IGREEN yeSelfowuni Yima
$ 3 icinyiwe (25%) Thenga kwiAmazonOku kuma kunokuyibamba ifowuni yakho phezulu, kanye kwidesika yakho yokusebenza. I-cutout esezantsi ishiya igumbi lentambo yokutshaja kwaye umniniyo unokutsalwa ukuya kuthi ga kwiidigri ezingama-45 ukuze ufumane eyona ndawo ifanelekileyo yokubeka ifowuni yakho.
Ukuma kwetafile ye-Ugreen
- sebenzisa ikhowudi UGREENPA003
$ 3 icinyiwe (30%) Thenga kwiAmazonIbanzi kwaye yomelele ngokwaneleyo ukuba ibambe ithebhulethi kanye ecaleni kwekhompyuter yakho. Indawo yokukhaba inokugoba ukuze icabalele kwaye kulula ukuyihambisa kuyo nayiphi na ibhegi. Kwaye, ithi & apos; ithebhulethi ', kodwa oku kunokuba lula njengokuma kwefowuni, nayo.
isamsung 2 ngolwesiHlanu omnyama
Eyona sony xperia yefowuni 2016
I-T-Mobile ityhala uhlaziyo olutsha lukaNovemba lweGPS S7 kunye nomda we-S7
Isivumelwano esitsha sangaphambi koMnyama ngoLwesihlanu sisimanga esihle kubadlala umdlalo
Ziya phi iiapps kwi-iPhone? Apha kulapho iOS 14 ibeka ukhuphelo lwakho olutsha
Ukuphosa iscreen se-Android kwiPC yakho ngumoya opholileyo ngaphakathi Windows 10 Ukuhlaziywa kwesikhumbuzo
Eyona iPhone ibiza ixabiso eliphantsi onokuyithenga ngo-2021
IMotorola ihlaziya iMoto X yoHlelo oluSulungekileyo ukuya kwi-Android 7.0 Nougat eMelika